Dawlada Sierra Leone Oo Ka Baxday Heshiis Ay La Gashay Chine Oo Lagu Dhisayey Madaar Cusub Iyo Sababta Keentay.
(Hadhwanaagnews) Friday, October 12, 2018 00:41:53
Dawlada dalka Sierra Leone ayaa ka noqotay heshiis ku kacayey $318 million kaas oo meel ka baxsan caasimada dalkaasi lagaga dhisayey garoon diyaaradeed kaas oo ay dhisaysay shirkad laga leeyahay dalka Chine isla markaana laga maal galinayey daynta shiinuhu siiyo wadanka Sierra Leone.
Dhismaha mashruuca garoonka diyaaradaha ayaa loogu tala galay in dhismihiisu dhamaado bisha March ee sanadka 2022, iyada oo heshiiska lagu dhisayana uu saxeexay madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone Ernest Bai Koroma.
Talaabada ay qaaday dawlada Sierra Leone ayaa ku soo beegantay wakhti dawladaha Pakistan iyo Malaysia ay xukuumada Chine ku taageerayso mashaariic waa weyn oo la xidhiidha kaabayaasha dhaqaalaha ee
wadamadaasi, laakiin go’aanka dawlada Sierra Leone ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee xukuumad Afrikaan ahi ay ku joojiso heshiis hore loo shaaciyey oo dhex maray dawlada Shiinaha.
Wasiirka gaadiidka iyo duulimaadyada dalka Sierra Leone oo la hadlay BBC ayaa soo bandhigay aragtida dawladiisa “ ka dib markii si weyn loo tixgeliyey dedaalka socda aragtida dawladu waxay noqotay in aan dhaqaale ahaan loo sii wadi Karin dhismaha garoonka diyaaradaha ee cusub iyada oo kan hada jiraa uu yahay mid si weyn loo isticmaalo.”
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas raaciyey “Waxaan qaatay go’aankii ugu wanaagsanaa ee dalkayga anfacayey laakiin ma cada haddii ay jiraan ganaaxyo dhaqaale oo ka imanaya ka bixitaanka heshiiska.”
Sidoo kale afhayeen u hadlay wasaarada arimaha dibada ee dalka Sierra Leone Oo lagu magacaabo Lu Kangayaa warbaahinta u sheegay in joojinta heshiiskani aanu la xidhiidhin khilaaf u dhaxeeya dawlada Chine, isaga oo xusay in mashruuca la joojiyey uu ku jiray sahamin.
Halkan Guji Si Aad Warkaas Oo Faah Faahsan U Akhrisato